“Allahayow jannada gee, bulshada guday xilkeediiye”. W/Q : Abdiqani Mohamed Ali
February 16, 2013 8:54 pm GMT - Written by PP - Edited by PP
Mahad oo dhami waxay u sugnaatay Eebe weyne Naxariis iyo nabad galyo korkiisa ha ahaato (Suubaneheenii Maxamed).
Waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa’iidaysto inaan tacsi tiiraanyo leh Si Guud ugu Diro shacabka soomaaliyeed , Culumada iyo ardaydii uu wax soo baray Caalimkii weynaa ee Sheekh C/qaadir Nuur Faaraax Gaar ahaan waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Shiikha waxaan eebe uga baryayaa Samir iyo iimaan inuu ka siiyo ayna ku sabraan qadarta eebe.
“Waajibkii gudaye, Rabiyow Janatul fardowsa ka waraabi”
Akhriste naf walbaa geerida way dhadhaminaysaa hadii aduunkan lagu waarayana nabdi maxamed Ayaa loo dayn lahaa , dadkoo dhami waa wada bsafar waxaana hayaan loo yahay hoygii aakhiro , qof Walbaana wuxuu ku harayaa Goobtii rabi u qoray wuxuuna harayaa maalin iyo saacad xadidan.
Qorista qormadaan waxaa igu khasbay qalbigayga wuxuuna gacmaha ku amray in ay qalinka Qaataan Waxna ka yiraahdaan geerida naxdinta leh ee hogaamiye Aabe C/qaadir Nuur Faarax .
Warka xumi ma gaabshoo dabayl, gaaru leeyahaye
Gabbood kuma negaado habeen, guula sugi waaye
Gudguduudka waaguu guryaha, noogu soo galaye
Gelin buu ku gaaroo dadkii, wada gariiraye
Geeridu xaq weeyee mid baa, lala gariiraaye
Gocashiyo xanuun bay midkeed, gaar u leedahaye
Naxdin iyo gujaa laga dhaxlaa, tii halyeey go’oe
Dhiilladu si gooniya hadday, godoshay laabtayda
Qalbigay gobtahanyoonayiyo, murugaday gaartay
Madaxay gadaadiyo ilmaday, gabaxli waa daw’e
Jirku ima gigleeyeen ishuna, may galgalateene
Naftay garab la’aantay ogtahay, diidday gama’iiye
Gabbal-dhacay, dayax baa god galay, gacal u iishaaye
Naxariistii jano allaha ka waraabiyo Sheekh C/qaadir Nuur Faarax waa xidig iyo caalim umada Soomaaliyeed ka baxay runtii maqalka geeridiisu waxay gilgishay dhammaan Quluubta umada Soomaaliyeed ee samaha jecel , waana dareen naxdin leh balse qadarta alle waa mid Mudan in la Qaato laguna qanco , Xaaladaha lagu dhinto waa kuwa kala duwan , maantana waxaan dhihi Karnaa Sheekh C/qaadir wuxuu lahaa nasiib wuxuuna dhintay isagoo salaad ku jira hadana ammintu Ay Tahay Casar
Maalintuna ay maalin qiima badan tahay oo jimce ah , da’da uu ku jirayna ay ahayd 70 Iyo Wax ka Badan 45 sano waqti lagu qiyaasayna uu ka shaqaynayay u khidmaynta diinta balse waxaa Walbahaar ku Jira arxan laawihii ku dhiirraday in uu dhiigiisa ku faraxasho Indhihii Umada Soomaaliyeed.
Maaha wax cusub dilka iyo laynta culumada waana arrin soo taxnaa illaa waqtigii Khulufada naf walbaana waxay leedahay ajal aysan dhaafi Karin sheekh C/qaadirna ajashiisii ayaa timi ilaahay khaatumo fiican ha uga dhigo qabrigana allaha u waasiciyo .
waxaa lagu xasuusan doonaa ka shaqaynta wanaaga iyo isu keenida umada islaaxa iyo Heshiisiinta Dadka , fidinta diinta , barista iyo baraarujinta da’ yarta sidoo kale waxaa lagu xasuusan doonaa Mawqifkii uu ka istaagay Marxaladiihii iyo dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay qarnigii tagay .
Waxaan rabaa inaan shacabka reer garowe hambalyo hawada u mariyo shaqada wacan ay qabteen Waan ku bogaadinayaa iyagoo aan ka quusan qabashada gacan ku dhiiglaha isagoo shacabka Qaybtood uu dhiigooda daadiyay dhiigyacabkaas.
Dawlada waxaan leeyahay garate inaad adinku is ilaalisaan ciidan fara badan geesaha iska dhigtaan Gudoomiye dagmo oo aan bulshada wax ugu ool ilaalo u samaysaan dhaqaalena ku bixise balse Maxaa diiday in culumada iyo hal doorka dadka ee maqaamka sare umada ka jooga inaad ilaalo u Samaysaan ? Qadarin iyo xurmayn miyaysan mudnayn ? karaamo iyo kor u qaadid miyaysan Mudnayn? Jawaabaha waydiimahaas waa kuwa jawaab u baahan .
Uguma tala galin qormada inaan dheereeyo ubucda iyo ujeedka qoraalkuna waxay ahayd inaan Umada soomaaliyeed la qaybsado xanuunka ay wada dareemeen gaar ahaan aan tacsi tiiraanyo Leh gaarsiiyo qoyskii uu ka baxay sheekha ilaahay waxaan uga baryayaa in uu qabriga u waasici Fadhigiisana allaha ka yeelo jannada fardawsa annagana Samir iyo iimaan allaha naga siiyo .
Waxaan ku soo gunaanadayaa erayo kooban oo ka hadlaya miisaanka iyo qiimihii sheekha
Ninba goor ay noqotaba Godka lama huraayee
goobtuu banneeyaan mala goconayaa
garasho dheeridiisii baan mala goconayaa
Taariikhdu waa ma guurtee diiwaanka ayuu galay
Magaciisii muu go’in maqaamkiisi ma gurin
Macallin gaamuriyo maskax gaamurtuu lahaa
Gar hayeenka nabaduu ahaa geed har loo weyne
Gees kastoo la eegaba ifkaa, guulo loo qiraye
kamu guurin xiskeenna gal dahab buu ku qoran yahay
Aan soo gaabsho hadalkoo gunaanado dhambaalkee
Gargaar kale ma hidin karo duco ila gudboonoo
Galabta aan awoodee Guullow Allahayow
U waasici godkiisoo kuwa gelaya Fardowsee
Geeshkii rasuulka allahayaw ka yeelo
Galladdaada ugu deeq aamiin aamiin aamin
Allahayow jannada gee bulshada guday xilkeediiye.
W/Q : Abdiqani Mohamed Ali